Ogaden News Agency (ONA) – Kulan ay yeesheen oday dhaqameedyada S.Ogadeniya iyo gudiga jaaliyada Koonfur Afrika (JOKA)
Kulan ay yeesheen oday dhaqameedyada S.Ogadeniya iyo gudiga jaaliyada Koonfur Afrika (JOKA)
Kulankan oo ahaa mid qiimo weyn ugu fadhiya bulshada dhexdeeda gaara ahaan labada dhinac ee JOKA iyo oday dhaqameedkaba ayaa waxaa ka soo baxay arimo muhiim ah iyadoo lagaga wada hadlay xaaladaha halganka waxii ka soo kordhay, waxii lagu biirin lahaa iyo waxii horey loo qabtay oo laysugu bogaadiyay. Magaalada Uitanhage ayuu ka dhacay kulankan salaada duhur ka dib. Shirka ayaa waqtigii loogu tala galay furmay, waxaana lagu furay siday caadadu ahayd wacdi diini ah oo uu soo jeediyay sheikh Maxamed oo ka hadlay arima badan oo diinta quseeya iyo sidii loo taageeri lahaa halganka socda.
Ka dib waxaa lagu so dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda halgame Bashiir Muxumad oo ka soo jeediyay goobta warbixin taabanaysay dhinacyo badan oo ka koobnayd dhinaca deegaanta Ogadeniya waqtiga lagu jiro. Waxaa kaloo warbixinta lsgu soo qaatay siyaasada Ethiopia meesha ay marayso, dhaqaalaha Ethiopia oo markay ku filaan weyday daymihii iyo deeqdii la siinayay u soo jeedsatay jaaliyadihii Somaliya iyo Ogadeniya inay u kaba gashatay siday uga dawarsan lahayd. Waxaa kaloo ka mid ahayd warbixinta ku saabsan Arimaha bulshada ee Ethiopia inay qabaai’lkii iyo qawmiyadihii Ethiopia oo dhami ay colaad ka qaateen qowmiyada yare ee Tigreega ee boobka ku haysa dhulkooda. Qodobadaasi oo mid walba sidiisa faahfaahin dheer looga bixiyay ayaa waxaa la’isla qiray inay dhinacyadaasoo dhan ay ka nugushahay Itobiya.
Waxaa kaloo hadalka lagu soo dhaweeyay hogaanka abaabulka iyo arimaha bulshada halgame Cade Axmed Sulub waxuuna dhina cwalba ka tusaaleeyay hogaamiyayasha dhaqanka ee meesha isugu yimid dhibaatada Ethiopia iyo u adeegayaashoodu maagan yihiin inay bulshada dhexdeeda ka abuuraan isagoo tusaalooyin fara badan soo qaatay.
Intaasi ka dib ayaa oday dhaqameedyada S. Ogadeniya ee shirka ka soo qaybgalay lagu wareejiyay hadalka, waxaana ay si aad loola dhacay u soo qaateen inay waayo arag u yihiin gumaysiga Itobiya, taariikho badana ay u soo joogeen muujinaysa inay tahay Ethiopia cadaw aan waxba laga dheefaynin. Hal ku dhega odayada wuxuu ahaa halganka waxaan ahayn ma nihin. Waxaad tihiin guduntii anaguna waxaan nahay daabkii oo nin daacad ihina dabada hayo. Iyagoo ula dan lahaa waxa ururka JWXO ka maqan ayaa inaga wada maqan.
Waxaa hadalka lagu soo gunaanaday, waxa inaga maqan iyo yoolka halganku intuu socdo anaguna waan soconaynaa meesha geediga loo yahay ayaan rarka ku furaynaa.
Hadaladii oday dhaqameedyada waxaa ka mid ahaa halganku waa nin qori u sita, nin qalin iyo aqoon u sida iyo nin dhaqaale iyo maal u sida. Intaaba kii aan geli karaaba waan ku jirnaa.